Orinasa mpamokatra Gelatin Food grade Gelatin | Yasin
Pharmaceutika gelatin Gelatin
Sakafo Kilatin Gelatin
Peptide melon mangidy
Mampiala Peptide ny boriky
Shell Shell Capsule
Capsule Capsule tsy misy legioma
Vorona Capsule Gelatin Empty Capsule
Traikefa amin'ny mpamokatra
Ny gelatina varotra dia miovaova amin'ny80 ka hatramin'ny 260 Bloom grama ary, ankoatry ny entana manokana, tsy misy loko, tsiro, preservatives ary additives simika. Ny gelatin dia fantatry ny ankamaroan'ny olona ho toy ny sakafo azo antoka gelatin, ny toetra mampientanentana azy ary ny fahafahany mamorona gel azo ahodina thermo.Gelatin dia proteinina vita amin'ny hydrolysis ampahany amin'ny collagen biby. Ny gelatin-tsakafo dia ampiasaina ho toy ny mpamatsy gelling amin'ny fanaovana jelly, marshmallow ary vatomamy. Ankoatr'izay, izy io koa dia ampiasaina ho toy ny mpandrindra matevina sy matevina amin'ny famokarana jamam, yaourt ary gilasy.
Entana ara-batana sy simika
Herin'ny Jelly Bloom 140-300Bloom
Viscosity (6.67% 60 ° C） mpa.s 2.5-4.0
Fanapahana ny viscosity % ≤10.0
hamandoana % ≤14.0
Transparency MG ≥450
Transmittance 450nm % ≥30
Sulphur Dioxide mg / kilao ≤30
Hidrogen peroxyde mg / kilao ≤10
Rano tsy mety ritra % ≤0.2
Heavy Mental mg / kilao ≤1.5
arsenika mg / kilao ≤1.0
chrome mg / kilao ≤2.0
Isan'ny bakteria tanteraka CFU / h ≤10000
E.Coli MPN / h ≤3.0
Flow tabilao Ho an'ny famokarana Gelatin
Ny gelatin dia be mpampiasa amin'ny confection satria mihosom-bolo, gels na mivaingana ho sombin-javatra miempo miadana na miempo ao am-bava.
Ireo aretina toy ny bera gummy dia misy gelatine somary avo isan-jato. Ireo vatomamy ireo dia mihalefaka miadana kokoa ka manitatra ny fankafizan'ny vatomamy sady manalefaka ny tsiro.
Ny gelatin dia ampiasaina amin'ny fifangaroana nokapohina toy ny marshmallows izay mampihena ny fihenjanan'ny tampon'ny syrup, manamafy ny fo amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny viscosity, mametraka ny foam amin'ny gelatin, ary manakana ny fitaratry ny siramamy.
Ronono sy Desserts
Ny tsindrin-tsakafo gelatin dia azo omanina amin'ny fampiasana gel Type A na Type B miaraka amin'ny Blooms eo anelanelan'ny 175 sy 275. Ny avo kokoa amin'ny Bloom, ny gelatin vitsy kokoa takiana amin'ny napetraka mety (izany hoe ny gelatin 275 Bloom dia mitaky gelatin 1,3% raha mila gelatin 175 Bloom 2.0% hahazoana setra mitovy). Ny mamy ankoatry ny sukrosa dia azo ampiasaina.
Ny mpanjifa ankehitriny dia miahiahy amin'ny fividianana kaloria. Mora ny manamboatra tsindrin-tsakafo gelatin tsy tapaka, manandrana mahafinaritra, mahavelona, ​​misy tsiro isan-karazany, ary tsy misy afa-tsy caloria 80 isaky ny antsasaky ny kapoaka. Ny kinova tsy misy siramamy dia kaloria valo fotsiny isaky ny sakafo.
Hena sy trondro
Gelatin dia ampiasaina amin'ny asan'ny gel, fromazy an-doha, souse, horonam-borona, fihinan-dranomaso ary am-bifotsy ary ireo vokatra hena misy karazany maro karazana. Ny gelatin dia miasa mba hisitrika ranon-kena ary hanome endrika sy firafitra ireo vokatra izay mety hianjera. Ny haavon'ny fampiasana ara-dalàna dia 1 ka hatramin'ny 5% miankina amin'ny karazana hena, habetsaky ny ron-kena, gelatin Bloom ary ny firafitra tiana amin'ny vokatra farany.
Fandoavana divay sy ranom-boankazo
Amin'ny fiasa ho toy ny coagulant, ny gelatin dia azo ampiasaina hanaparitahana ny loto mandritra ny fanaovana divay, labiera, cider ary ranom-boankazo. Izy io dia manana tombony amin'ny fiainana talantalana tsy voafetra amin'ny endriny maina, mora ny fikirakirana, fanomanana haingana ary fanazavana mazava.
Amin'ny ankapobeny dia amin'ny 25kgs / kitapo.
1. Kitapo poly iray anatiny, kitapo misy tenona roa ivelany.
2. Kitapo Poly iray anatiny, kitapo Kraft ivelany.
3. Araka ny fitakian'ny mpanjifa.
1. miaraka amin'ny paleta: 12Mts ho an'ny fitoeran-drano 20ft, 24Mts ho an'ny fitoeran-javatra 40Ft
2. tsy misy Pallet: 8-15Mesh Gelatin: 17Mts
Maherin'ny 20Matine Gelatin: 20 Mts
Ataovy ao anaty kaontenera mihidy mafy, voatahiry ao anaty faritra mangatsiaka sy maina ary misy rivotra.
Tazomy amin'ny faritra madio GMP, voafehy tsara ny hamandoana ao anatin'ny 45-65%, ny mari-pana ao anatin'ny 10-20 ° C. Ara-dalàna ny fanitsiana ny mari-pana sy ny hamandoana ao anatin'ny trano fitehirizana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo fotodrafitrasa fanamafisam-peo, fampangatsiahana ary fanalefahana.
Kilatin Sakafo Sakafo
No. 86, Anling 2nd Road, Distrikan'i Huli, Xiamen, Fujian, Sina.